Isbedelka bulshada ku dhacay boqolkii sannadood ee ugu dambeeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Is-bedel badan ayaa ku dhacay bulshada muddadii 100 sano aheyd ee ugu dambeeyey.
Isbedelka bulshada ku dhacay boqolkii sannadood ee ugu dambeeyey
Nolosha maanta ayaa ka wanaag-san tii shalay
La daabacay fredag 24 januari 2014 kl 12.55
Is-bedel ballaaran ayaa ka muuqda dalkan marka la isu barbar-dhigo sannadaha 2014 oo aan iminka ku jirno iyo 1914 oo ey ka soo wareegtay 100 sannadood, sida uu sheegay taariikh-yahan Ulf Jorner oo horay madax-waaxeed uga ahaan jiray hayadda tira-koobka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanno SCB.
Buug-sannadeedkii ugu horeeyay oo hayaddu soo saarto ayay sannadka ka soo wareegtay boqol sannadood sannadkii 1914:
- Bulshada maanta ayuu gebi ahaan is-bedel ballaaran ku dhacay. Isbedellada ku dhacey ayaa tusaale loogu soo qaadan karaa dardarta magaaleeynta. Kolkii hayadda tira-koobka SCB biloowday tira-koobkeeda sannadlaha ayey 50% bulshada iswiidhishku ku dhaqnaayeen magaalooyinka yaryar, halka ey iminka 80% ay bulshadu ku dhaqan tahay magaalooyin. Is-bedel ballaaran ayaa halkaa ku dhacay. Farqi midkaa la mid ah in dad badani ey beeraley ahaayeen, halka iminka ey ku howl-galaan hoowlaha adeegga. Waxaa marka la oran karaa in farqi ballaaran uu u dhexeeyo.
Iminka oo ey boqol sannadood ka soo wareegeen buug-sannadeedkii ugu horeeyay oo ay hayadda SCB soo saarto, ayuu sawir-qoraaleed, jaantus iyo garaafyo kaga warramayaa qaab-dhismeedka bulshada Iswiidhen. Kolkii hayadda tira-koobka SCB ay soo saartay buug-sannadeedkeedii ugu horeeyay sannadku markuu ahaa 1914 waxaa qooysaska badankood caadiyan lagu magacaabi jirey Johansson. Qooys ku dhaqan tuulada, ku safra inta badan tareen oo farriimmaha la isugu diro telegraam ahaan halka iminka farrinta la isugu diro SMS-ahaan.
Maanta waxaa qooyska lagu magacaabaa Andersson. Qooys ku dhaqan magaalo. Saffarraddii lagu geli jirey xaddiidka tareemmada ayaa yaraadey, halka ey waddooyinka gawaarridu kor u kaceen 62 000 oo kiilo-mitir, kuwaasina oo gaarey 261 000 oo kiiloo-mitir. Waa dherer u dhigma shan jeer oo dhulka lagu soo wareego. Sannadkii 1914 waxaa sannadkii la diri jirey 718 000 oo telegraam, halka maanta muddo labaatan daqiiqadood aan gaarin la isugu diro sms-yo tiradaa ka badan.
Socdaalka ayaa sidoo kale kaalin weyn ka ciyaaray is-bedelka bulshada, sida uu sheegay Ulf Jorner:
- Is-bedel aad u ballaaran ayaa ku dhacay. Sannadkii 1914 weli waxaa dalkan ka jiray qax. Qaxii ugu weynaa ee loo ambabixi jirey dalka Mareeykanka ayuu hoos u dhac ku yimid. Hase yeeshee inkasta oo weli dalkan laga socdaalo ama dib loogu soo socdaalo, waxaa la oran karaa maanta inuu yahay waddan loo soo socdaalo, halkii awal looga qixi jirey.
Bulshada Iswiidhen ayuu ku dhacay is-bedel aad u ballaaran boqolkii sannadood ee ugu dambeeyey. Waa is-bedello aaney jirin sannado la mid ah ee loo barbar-dhigi karo, sida uu sheegay. Dareenka oraneya in shalay ay maanta ka wanaag-sanayd ayaanu Ulf Jorner ku iibsadeen beeysteen:
- Haddii la eego tirakoobyada, lana darso waxaa caddaaneeysa in xaaladdu ka liidatay sida ay hadda tahay 100 sannadood hortood. Waxaad tusaale ahaan u soo qaadan kartaa halka ey taagneyd tira-koobka dhallaanka saqiira. Tirada dhabta ah dusha kama sheegi karo, hase yeeshee kolkii tira-koobka la bilaabay waxay middaasi gaarsiisneyd 25%. Waa tiro aan ku dhoweyn xaaladdu sida ay maanta tahay. Maanta waxay gaarsii-san tahay wax aad uga yar boqolkiiba mid. Waxaan u dhexeeya farkhi aad u ballaaran. Waxaa shaqeeya dar-yeel caafimaad ee aad u sareeya. Noloshuna way ka sarreeysaa. Ma sahlana in la sheego wax ey waayadii hore kaga wanaag-sanaayeen maanta.
Xaaladda Soomaaliya maanta iyo shalay teebaa door-bidaysaa?